Zvaungaita Kana Watsiurwa | Mazano Okubatsira Mhuri
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Maltese Myanmar Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese (Brazil) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
“Kana mumwe munhu achikutsiura, anenge ari kukuudza kuti pane chimwe chinhu chauri kuita zvisizvo. Uye handisati ndambonzwa anoti, ‘Ndinofarira zvokutsiurwa.’”—Amy, 17. *
Munhu anoramba kutsiurwa akafanana nomutyairi wendege anoramba kuteerera zvaari kuudzwa nevanotungamirira kufamba kwendege vari pasi. Anogona kupinda mutsaona yakaipisisa.
Zvinokuomera here kubvuma kutsiurwa nevabereki vako, vadzidzisi, kana kuti vamwe vanhu vakuru? Kana zvichikuomera, nyaya ino ichakubatsira kukunda dambudziko racho.
Munhu wose anototi atsiurwe.
“Hapana chinombonyadzisa nokutsiurwa paunenge wakanganisa.”—Jessica.
Kutsiurwa hakurevi kuti haubatsiri.
“Jehovha * anotsiura waanoda, sokutsiura kunoita baba mwanakomana wavanofarira.”—Zvirevo 3:12.
“Vanhu pavanonditsiura, ndinonyanya kufunga nezvokunetseka kwavange vachiita kuti vanganditsiura sei uye kundida kwavanondiita kwaita kuti vanditsiure.”—Tamara.
Kutsiurwa kunoita kuti uwedzere kuva munhu akanaka.
‘Teerera kurangwa uve akachenjera.’—Zvirevo 8:33.
“Kuti ukure uri munhu kwaye, unotofanira kutsiurwa. Paunotsiurwa unoona maonerwo aunoitwa nevamwe uye unobatsirwa kuti usiyane netsika dzakaipa dzaunenge usingatozivi kuti wava nadzo.”—Deanne.
Ona zvinhu sezvazviri. Zviri nyore kugumbuka paunotsiurwa. Asi edza kusafunga nezvemanzwiro auri kuita. Imboedza kufungidzira uri iwe uri kutsiura mumwe munhu, zvimwe munun’una wako anenge akanganisa sezvawaita. Unofunga kuti kumutsiura kwakanakirei? Iye zvino chiedza kuzviona uri iwe watsiurwa.—Zvinotaurwa neBhaibheri: Muparidzi 7:9.
“Dzimwe nguva unogumbuka chaizvo nokutsiurwa kwaunenge waitwa zvokuti unokanganwa kuti munhu akutsiura anga achingoedza kukubatsira kuti uite zvakanaka, kwete kuti akurwadzise.”—Theresa.
Zvininipise. Usarambe kutsiurwa pamusana pokudada. Uyewo paunotsiurwa usabva wanyanya kuzviona sousingabatsiri. Kuzvininipisa kuchakubatsira kuramba uine mafungiro ari pakati nepakati. Yeuka izvi: Kutsiurwa kunonyanya kurwadza ndiko kunonyanya kukubatsira. Kana ukaramba kutsiurwa, pasinei nekuti uri kupa chikonzero chipi, unenge wazvitadzisa kuwana chimwe chinhu chaizokubatsira muupenyu.—Zvinotaurwa neBhaibheri: Zvirevo 16:18.
Kutsiurwa kunonyanya kurwadza ndiko kunonyanya kukubatsira
“Kubvuma kutsiurwa kunobatsira kuti uzova murume kana kuti mudzimai kwaye. Asi kana tikaramba kutsiurwa ndisu tinozochema mangwana.”—Lena.
Tenda. Tenda munhu akutsiura, kunyange kana kutsiura kwacho kwakaoma kutambira. Chokwadi chiripo ndechokuti, munhu wacho anoda nemwoyo wose kuti zvinhu zvikufambire zvakanaka.—Zvinotaurwa neBhaibheri: Pisarema 141:5.
“Unenge wagona kana ukati ‘Maita basa,’ kunyanya kana kutsiurwa kwacho kuchizokubatsira. Kunyange kana ukatadza kuona chikonzero chawatsiurirwa nyatsotenda nemwoyo wose zvaitwa nemunhu wacho.”—Carla.
^ ndima 11 Jehovha ndiro zita raMwari sokutaura kunoita Bhaibheri.
“Usakurumidza kugumbuka.”—Muparidzi 7:9.
“Kudada kunotangira kuparara.”—Zvirevo 16:18.
‘Kana munhu akarurama akanditsiura waizova mutsa worudo.’—Pisarema 141:5.
“Kuudzwa zvawakanganisa kunorwadza, saka ndinoedza kuramba ndichiyeuka kuti andiudza wacho anoda chaizvo kuti ndiite zvinhu zvakanaka. Ndinoedza kumuona seshamwari inoda kuti ndiite zvinhu zvakanaka.”—JUSTIN
“Ndinoziva kuti ndinokanganisa, saka kana vanhu vakandiudza zvandakanganisa handigumbuki. Izvi zvinoita kuti ndizive zvandinofanira kugadzirisa.”—CHARLETTE
Tese tinoita zvikanganiso, pasinei nezera redu kana kuti ruzivo rwatava narwo. Asi tingaita sei kana takanganisa?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Zvaungaita Kana Watsiurwa